Sharm El Sheikh - idolobha elihle resort. Lokhu iparele Egypt izivakashi ezivela kuwo wonke umhlaba. Izivakashi bazokwazi ukuba baqonde izinzuzo ukuphumula kule ndawo enhle kangaka. Phakathi amahhotela eziningi zendawo ukwamukela izivakashi, anikeza izinkonzo zabo ukuba AA Grand Oasis kuyona 4 *. Ngokusekelwe Izibuyekezo kwesokunxele abantu iholidi baye leli hhotela, kungashiwo kwaphetha ngokuthi kunezinkolo ulinde izivakashi yokuchitha isizungu ezimnandi futhi othakazelisayo.
AA Grand Oasis kuyona 4 *: Incazelo
Ngaphezu indawo yayo elula, ihhotela ejabulisa izivakashi nge bokwakhiwa kwezindlu zayo. Zonke izakhiwo eyinkimbinkimbi zenziwa ngesitayela Arabhu. Uma uthi nhlá, isakhiwo okungase kuthintwe ngokuvumelana ngokuphelele kuyo yonke imininingwane ezisemagumbini eshelelayo domes ezimhlophe, vaults ephoqelela nemengamo. Ayikho ukubukeka kancane ezikhangayo futhi yokulinda ehhotela. Le ndawo ikuvumela ukuba nomuzwa wokuthi isivakashi, owafika ngo esigodlweni omangalisayo Umbusi wamaSulumane. It kwenza lo mlando ube charm ekhethekile wezangaphakathi ibala ingilazi Dome, lapho ihholo ligcwele ukukhanya esithambile. Ngo element ngayinye kukhona ubuhle abaklami odale lesi simanga ezenziwe umuntu.
Ihhotela AA Grand Oasis kuyona 4 * (ex Tropicana) lavulwa ngo 2002. Ukwakha sokugcina kwenziwe lapha ngo-2011, futhi kusukela ngaleso sikhathi ihhotela ejabulisa izivakashi zayo enhle, enikeza umuzwa ekhaya induduzo.
Ihhotela AA Grand Oasis kuyona 4 * liseduze kakhulu sezindiza: ibanga km 2 kuphela. On insimu yalo ungabukela indiza isuka noma kokwehla izingane ngobuhlanya bajabule. Edolobheni elidala futhi eziseduze, futhi engafinyelelwa kwamaminithi ambalwa. Labo abafisa uvakashele ethekwini Naama Bay kuyodingeka ukunqoba mayelana 10 km. Ungathola kukhona ebhasini noma iya ngeteksi.
Ihhotela ikhona enhle oLwandle Olubomvu nogu ekhoneni ethule. Lapha izimo obuhle kakhulu kubantu umndeni iholide abafuna ukuze sijabulele ukuthula nobuhle yasemaphandleni wendawo.
Izivakashi uzofika ehhotela, ungahlala emakamelweni lapha umzimba omkhulu noma Villas omangalisayo. AA Grand Oasis kuyona 4 * inikeza ithuba lokukhetha okufana ofanele kakhulu amakamelo 461. Oluthandwayo inganikelwa:
Standard Room - Igumbi eyenzelwe abantu abathathu, abe yokugezela lokulala.
Igumbi Family - zokuhlala, okuyinto angazamukela 4 abantu, ehlanganisa yokugezela lokulala.
Standard Suite - Igumbi ehlanganisa egumbini lokuphumula, ekamelweni lokugezela, efanelekayo abantu 4.
Villa - efulethini elikhulu nge 4 okulala kanye 3 zangasese, okungase afake abantu 8.
Uma ukhetha Izinombolo, ukubukwa waqondisa kusukela window, khona-ke kungenzeka ukuthi makudle kukho okulandelayo:
Noma yikuphi ukukhetha ziyojabula izivakashi njengoba langa yokubhukuda bese izingadi manicured njengoba nice bheka nodedangendlale engapheli kolwandle. Ungakwazi ukujabulela ukubukwa kusukela kuvulandi noma ithala, lapho kube lula izivakashi zikhona izihlalo kanye itafula.
izivakashi Fika bangaqaphela wezangaphakathi elihle emakamelweni AA ehhotela Grand Oasis kuyona 4 *. Ukuhluzwa kwemibhalo kuwo 2015, lodgers kwesokunxele, uqinisekise ukuthi kukhona ukhululekile kakhulu, nakuba ifenisha isindala kakhulu. imibala Khanyisa ingaphakathi, izakhi okuhlobisa ukuthi ukugcizelela umbala wendawo - konke lokhu kwenza umbono omuhle.
Amakamelo, sibonga yokuhlanza nsuku zonke, ihlanzekile ngaso sonke isikhathi. Nelineni akulona egculisayo: ke siyashintsha nsuku zonke. Indlu yangasese has a okugeza kanye hairdryer. Lapha ungakwazi ushawa noma ubhavu.
Kwelinye igumbi ngalinye, izivakashi ingakwazi:
TV (zikhona iziteshi Russian);
ucingo (sikukhokhise inhlawulo);
mini-bar (iziphuzo ukuthenga).
Ihhotela AA Grand Oasis kuyona 4 * selikhanyise ngempela ensimini enkulu, esithinta ubuhle futhi uzilungise. Indawo intandokazi yezivakashi makhulu ongaphandle okubhukuda ezimbili. Eduze lezi amachibi Ungahlala uhlale ilanga loungers ngokufihla ngaphansi isambulela kusukela imisebe okuchochobalisayo ilanga. ZOKUBHUKUDA njalo ngokwanele, ngisho isizini okusezingeni eliphezulu.
Bazongena esitelekeni ubuhle babo emasimini utshani ehhotela. Naphezu ngenxa yesimo sezulu esishisayo, bona Riot zasemazweni. Yonke indawo kukhona ithrekhi ukhululekile, ongakwazi sizungeze lonke ihhotela futhi ejabulela ubuhle nokuthula lezi zindawo.
Izivakashi ezifika eseholidini e-Egypt, AA Grand Oasis kuyona 4 * Ihhotela uyonika inani ezihlinzekwa. Reception usebenza amahora angu-24, futhi ngasiphi isikhathi abaphathi isabele kuzosiza ukubhekana sezinkinga. Kule ndawo ungathatha izikhwama besiyoba sikhulu yokugcina, oda itekisi kuhambo noma ukudluliselwa sezindiza.
Mayelana AA Grand Oasis kuyona 4 * igcwele ezihlukahlukene izitolo lapho izivakashi uphiwa eziyizikhumbuzo, ukudla kanye nezinye izimpahla. Amanani lapha akuzona liphezulu kakhulu, ngaphezu, ungahlala behlise ngoba into zakho ozithandayo.
Mahhala ehhotela, ungasebenzisa amasevisi alandelayo:
Ukuze ethile ngesikhathi AA Grand Oasis kuyona 4 * ayatholakala:
ukuwasha kanye yokuhlanza izingubo izingubo futhi ilondolo;
iseluleko kanye nezinsizakalo kudorhodere;
ithuba ukuze ulungise izinwele zakhe ngesikhathi wendawo yokugunda;
usizo ikhefi internet, lapho kukhona inkokhelo kuze kuphele isikhathi isikhathi esichithwa lapha;
ihholo inkomfa abantu 150, futhi udinga ukuhlela izindawo umhlangano ibhizinisi;
salon ubuhle, lapho ungavakashela Igumbi umusi, sauna, Jacuzzi, massage.
Isikhathi esining impela izinga ukudla singahlangabezani izivakashi abakhetha iholide eGibhithe. AA Grand Oasis kuyona 4 * yindawo lapho bangakwazi ukujabulisa gourmets olindele kunazo. Imenyu lapha zahlukahlukene kakhulu, futhi ngokuvamile ukunikeza izivakashi ukuzama izitsha ezintsha. Taste Ukudla izinga nayo cha guba izivakashi. Naphezu uthando kwabaseGibithe namakha, ukudla okunikelwe lapha akakwazi ngokuthi okubabayo kakhulu noma anosawoti.
Ukuvula uhlelo "zonke okufakayo" olunikezwa yokudlela yehhotela main, elise esitezi sesithathu kwaleli hholo. It yenzelwe abantu 400. Ehholo ivulekile njalo fresh futhi cool, okuyinto izivakashi kumjabulisa kakhulu. Oweta ukwenza umsebenzi oncomekayo nomsebenzi wawo, ngakho kukhona cishe awekho emigqeni.
Jabulela okuhle idumela zokudlela A la Carte:
Umdobi & Rsquos - izinhlanzi yokudlela, lapho ungahlala ukujabulela izinhlanzi ngoqwembe, umbokwane, scallop, izimfanzi nezinye izitsha ezihlwabusayo.
Primi Piatti - yokudlela, ukukhonza izitsha bendabuko Italian kuhlanganise pizza kanye ezihlukahlukene pastas.
Sultana - yokudlela, ukunikela izivakashi kakhulu izitsha asempumalanga.
Ngeke abashiye izivakashi elambile kanye nemigoqo eziningi ezisebusweni ebhishi, echibini futhi endaweni yokwamukela izivakashi.
lolwandle Hlanza futhi uzilungise ingenye ezikhangayo esemqoka AA ehhotela Grand Oasis kuyona 4 *. Izithombe kule ndawo enhle ngokumangalisayo izobheka charm yayo. izivakashi Ujabule kakhulu ehlanzekile amanzi afudumele oLwandle Olubomvu, lapho ungabona khona ubuhle inqwaba izinhlanzi agqamile ukubona ubuhle ezihlala ezixhotsheni zamakhorali.
Ngesikhathi sebehlezi ogwini ungathola njalo khulula sun bed futhi omatilasi atholakala mahhala lapha. Ungase futhi uthathe izambulela kanye amathawula. Uhamba ogwini futhi zibe akvashuzah amanzi Kunconywa ngoba kunobungozi uzozilimaza kwi-coral.
Ukuze kube lula izivakashi wakha pontoon, enikeza ukufinyelela ukujula eside. Abathandi diving ngeke kudingeke bahambe emanzini, ashayisane coral.
Eduze nogu kulula kakhulu ukubhukuda izingane. Azikho ukujula, futhi abazali abakwazi wadida nge nokuvikeleka izingane zabo. Ngaphezu kwalokho, ngenxa amaholide zihlala ngeso elibukhali abatakuli.
Ihhotela AA Grand Oasis kuyona 4 * Izivakashi ungakwazi ukujabulela ezihlukahlukene kwezemidlalo ezivumela mnandi futhi kudlule isikhathi. Ikakhulukazi, lapha unga:
ukudlala enkundleni wahlomisa ngokukhethekile ngo mini-football;
Ukuvivinya umzimba ngendlela namanzi Ukuvivinya umzimba ngendlela;
Zihlole e table tennis;
khombisa emakhono abo imicibisholo;
Eminye imisebenzi ezemidlalo eztholakalayo AA ehhotela Grand Oasis kuyona 4 ngoba imali:
izivakashi eziningi enkulu ukuthi uthanda amanzi ezemidlalo, ayatholakala ngemali ethe xaxa. Njengoba amanzi ulwandle crystal ecacile, izivakashi eziningi ukungena okuthakazelisayo yokuchitha isizungu diving. Akufundisa bonke ubuqili lo mdlalo maphakathi diving. abafundisi amasevisi atholakala kuphela zindleko ezengeziwe.
Animation Ihhotela AA Grand Oasis kuyona 4 ayikuvumeli izimenywa bayethe isithukuthezi. Guys njalo izivakashi olumnandi ngemibono emisha, beveza eningi imincintiswano ezahlukene. Ngezikhathi zakusihlwa Animators ukukhombisa imibono ehlukeneko yezinto yemidlalo. Lapha ungakwazi futhi ubone imibukiso enhle, aphethwe izikhathi 3 ngesonto. Lokhu kungaba show inyoka, isisu ukudansa nabanye.
Abantu abasha ungathola nightlife in nightclub ezisemadolobheni, njengoba imisebenzi enjalo inqobo esizeni.
kumnandi kakhulu ngesikhathi izingane ngokuvakashela ehhotela AA Grand Oasis kuyona 4. Izimpendulo abazali uqinisekise ukuthi guys lapha uyohlale mnandi. Izingane ubungazwa ngamaholide merry futhi Animators namasu ukukhuluma isiRashiya. Lapha izingane Futhi unga:
nijabula ku lokudlala;
zibhukuda wahlomisa ngokukhethekile pool zezingane;
ukufunda okuningi entsha Mim Club Kids Club.
Futhi ukuze kube lula, izivakashi abasebasha anikezwa:
imenyu ekhethekile izingane;
izihlalo okusezingeni eliphezulu yokudlela main.
izivakashi eziningi ukukhetha ihhotela AA Grand Oasis kuyona 4 * ngenxa kungenzeka ukubona izinto Sharm el-Sheikh futhi uvakashele ezikhumbuzo eziningi amahle zomlando. Bambalwa yithuba uvakashele entabeni uMose, vakashela Isigodlo St Catherine, ukubona izinto laseSinayi.
Ayikho ethandwa kancane ehlukahlukene isikebhe uhambo. Izivakashi kanzima ukulwisana nesilingo sokubuka ithuba simazi kangcono izwe ngaphansi kwamanzi eya eLwandle Olubomvu, ngakho Uhambo ukucwiliswa uvakashele cishe yonke into.
Izivakashi abathanda ukuhamba emigwaqweni ebusuku ka Sharm el-Sheikh, lapho konke licwiliswa iphunga elimnandi le ikhofi asempumalanga. Lapha ungakwazi ukujabulela uphudingi, ezihlinzekwa endaweni yokudlela wonke umuzi, noma zama hookah kusuka induduzo nempahla emangalisayo esithambile. Lokhu nangomdlandla kuyindlela emithonjeni show ukucula ekhatsi Soho Square. Lapha ungakwazi futhi uvakashele esikhungweni sokushwibeka.
Buka zezivakashi abasebenzi ihhotela
Baningi ngamazwi anomusa, izivakashi sizophendula abasebenzi ngesikhathi AA Grand Oasis kuyona 4 *. Kukhona abasebenzi abakhuluma isiRashiya, ubani noma ngasiphi isikhathi ekulungele ukusiza izivakashi. Babehlale banobungane kakhulu kuzo zonke izimenywa, uyaphuma umxhwele kakhulu.
Ihhotela AA Grand Oasis kuyona 4 * - yindawo emangalisayo kuze kube iholidi ngaphambi ephelele. isivakashi ngasinye Uyokwazi-ke ukuthola izimo zokuphila ezimenza azizwe atjhaphulukile. Ngokwe holidaymakers, ihhotela ihlangabezana hhayi kuphela izinga labo izinga lenkonzo, ngisho luziveza izinkanyezi ezinhlanu. Umxhwele ukuthi hhotela elokhu ivela, njengoba kufakazelwa ingqalasizinda ezimisiwe.
omuhle kakhulu e ukubuyekezwa yazwakalisa ukukhathazeka:
indawo enhle ehhotela;
ukudla okunhlobonhlobo okumnandi;
kakhulu Igumbi isimo.
Ngokuqondene Izibuyekezo ezingezinhle, abazi zivame kakhulu. Ngezinye izikhathi ehhotela izivakashi AA Grand Oasis kuyona 4 * thola ukudla zokudla okuyisidina. Abanye bangase bangathandi izinga wokuhlanza emakamelweni, kanye ebhishi kubonakala kancane enyinyekile. Kodwa, ngokuvumelana abahambi, amaholide ehlelekile emahhotela ahlukahlukene, AA Grand Oasis kuyona 4 * linikeza izimo ezinhle kakhulu zokuphila. Kunoma yikuphi, lokhu endaweni isikhathi eside izohamba usayikhumbula kokuba iholide elikhulu.
Wedding stylist nengcweti. Indlela ukukhetha inkosi yayo, hhayi aphanjaniswe?